YK-11 चक्र र वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव अनुभव
1। YK-11 के हो?
2। YK-11 कसरी काम गर्दछ?
3। YK-11 लाई टेस्टोस्टेरोनमा तुलना गर्दै
4। YK-11 बाट कुन लाभहरू आशा गर्न सकिन्छ?
5। YK-11 खतराहरू प्रयोग गर्दा
6। शरीर सौष्ठवको लागि यो कसरी राम्रो छ?
7। कसले YK-11 प्रयोग गर्न सक्छ?
8। इष्टतम YK-11 खुराक
9। YK-11 आधा जीवन
10। YK-11 शरीर निर्माणको चक्र कस्तो देखिन्छ?
11। YK-11 परिणामहरू
12। YK-11 वास्तविक प्रयोगकर्ताहरु द्वारा समीक्षा
13। YK-11 प्रयोग गर्नु अघि र पछि
14। SARM YK-11 किनमेल (YK-11 बिक्रीको लागि)
1. के हो YK-11?
YK-11 को तहत (SARMs) चुनिंदा एन्ड्रॉयड रिसेप्टर मोड्युलेटर्स को वर्गीकृत गरिन्छ। एक वैज्ञानिक, युइइचिटो कानो, 11 मा SARM YK-2011 खोज्यो। उनको अनुसन्धान मा, उनले पुष्टि गरे कि यो यौगिक SARM हो। YK-11 (431579-34-9) रासायनिक संरचना स्टेरॉयड जस्तो देखिन्छ। यसको प्रभाव अन्य स्टेरॉयडहरूको जस्तै हो तर कम प्रतिकूल साइड इफेक्टका साथ। यद्यपि, यो मतलब छैन कि YK-11 स्टेरॉइड हो। प्रोस्टेटमा कुनै प्रभाव बिना, यस कम्पनले शरीरमा कपालको वृद्धि बढाउन सक्छ। यस उत्पाद को धेरै अधिक आक्रामकता हुन सक्छ यसैले केवल खुराकहरु को सही ले लिया जाना चाहिए। यो एक androgen रिसेप्टर हो र यसैले अन्य अरेजन रिसेप्टर जस्तै एक नै क्षमता मा बचािन्छ। YK-11 हड्डी र मांसपेशी ऊतकों मा चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मा बाँध्छ। यो परिणाम दुबला मांसपेशी जन को त्वरित बिल्डअप मा। SARM YK-11 प्रयोगकर्ताहरूले कम्तीमा कुनै पनि साइड साइड इफेक्टहरूको अनुभव गर्दछन् जुन कम्पाउन्डको छनौट गर्ने क्षमता हो।
अनुसन्धानको अनुसार, YK-11, केहि हदसम्म एक Myostatin अवरोधक हो किनभने यसले Myostatin गतिविधिहरू कम गर्न सक्छ। मोस्स्टिनटिन एक प्रोटीन निर्मित र शरीर द्वारा जारी छ। ठूलो मात्रा मा, यो प्रोटीन माक्योकेस को रूप मा उल्लेख गरिन्छ। मांसपेशियों को कोशिकाओं लाई यिनी प्रोटीन को बिरुद्ध मांसपेशी को मांसपेशियों को विकास को रोकथाम को रिहाई। सामान्यतया, तिनीहरू मांसपेशिहरु को कोशिकाओं को संकुचन पछि भार उठाउने को समयमा रिलीज हो। YK-11, एक Myostatin अवरोधक हुनु, शरीरमा घुसाउने myostatin को मात्रा कम गर्दछ प्रयोगकर्ताले चक्र समयमा दुबला मांसपेशी जन निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
धेरै SARM हरूमा, YK-11 त्यहाँ सबैभन्दा राम्रो मध्ये एक हो। LGK-4033 जस्तै अन्य SARM हरूसँग YK तुलना गर्नु, यो प्रायः सूचीमा शीर्ष हुनेछ। यद्यपि, समर्थनका लागि न्यूनतम अनुसन्धान गरिएको छ कि YK-11 सबैभन्दा बलियो हो। यस कारणको लागि, अधिक प्रदर्शनका लागि प्रयोगकर्ताहरू SARM हरु प्रयोग गर्न मनपर्छ जस्तै RAD-140, GW-501516 वा Ostamuscle।
2. कसरी गर्छ YK-11 काम?
SARM YK-11 शरीरमा अन्ड्रोजन रिसेप्टरमा बाँध्छ। यो क्रियाकलाप मांसपेशियों को कोशिकाओं द्वारा निर्मित एनाबिक कारकहरु को स्तर मा सुधार गर्दछ, जो बदले मा दुबला मांसपेशी मास को निर्माण को बढावा गर्दछ। अन्य SARM हरूसँग कम र रेजिकिक प्रभावहरूको साथ तुलना गर्दै, YK-11 नतिजाहरू रोमाञ्चक छन्। एक वैज्ञानिक अध्ययन निष्कर्ष निकालेको छ कि मांसपेशियों को कोशिकाहरुमा YK-11 (431579-34-9) प्रभाव धेरै अधिक छ। परिणामले संकेत गर्दछ कि मांसपेशियों को कोशिकाओं द्वारा अधिक एनाबोलिक यौगिकहरु लाई उत्पादन गरियो जब YK-500 को 11nol को तुलना मा टेस्टोस्टेरोन को व्यवस्थापन गरे अनुसार दिइएको थियो।
यो निष्कर्ष निकाल्नु भनेको यो YK-11 माटोपेशी विकास को लागी बस जस्तै अन्य SARMs को विकास को लागि डिजाइन गरिएको छ। YK-11 कार्यहरू उत्कृष्ट रूपमा नयाँ कक्ष वृद्धि, मांसपेशी विकास, र मांसपेशी अवधारण को बढावा दिन को लागि। यस यौगिक प्रयोगकर्ताहरूले बजारमा अन्य स्टेरियोड्सको कारणले जरुरी साइड इफेक्टहरूसँग सम्भव हुन आवश्यक नभए यी सबै लाभहरूको आनन्द उठाउन सक्दछ। यो संभवतया कारण हो किनकि YK-11 लोकप्रियता शरीर निर्माणका बीचमा बढिरहेको छ। अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूले कम्पाउन्डलाई मनपर्छ जसले मांसपेशीहरूमा बलियो सकारात्मक प्रभाव देखाउँदछ तर शून्य साइड इफेक्टहरूमा न्यूनतम।
YK-11 ती व्यक्तिहरूको लागि दुबई मांसपेशिहरु ठूलो बनाउन को लागी पुरा तरिकाले काम गर्दछ। साथै, यो बिजुली बिल्डरको लागी आदर्श छ जुन चक्र पछि पहिले नै निर्माण गरिएको मांसपेशीहरू कायम राख्न चाहन्छ र चेक मा मोटो सेकेन्डहरू राख्दा यी मासुको गुणस्तर घटाउन चाहन्छ। Sarm RAD140 (टेस्टोलोन) प्रयोगकर्ताले भने: समीक्षाहरू, चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जोखिमहरू
3. YK-11 लाई टेस्टोस्टेरोनमा तुलना गर्दै
टेस्टोस्टेरोन को आवश्यक हार्मोन मध्ये एक हो जसको उत्पादन र शरीर को तंत्र मा उपयोग गरिन्छ। यसले दुई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ; एक anabolic स्टेरॉयड र एक सेक्स हार्मोन को रूप मा। Exogenous टेस्टोस्टेरोन शरीर मा एक इंजेक्शन को माध्यम ले पेश गरिन्छ, जब पनि कम से कम प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन हुन्छ। व्यक्तिहरू जीवनी वृद्धि गर्न चाहन्छन्, वृद्धि गरिएको शरीरको बल र दुबला मांसपेशिहरु वृद्धिले टेस्टोस्टेरोन प्रयोग गर्दछ किनभने यसले स्टेरॉइडका लागि पनि प्रभाव पारेको छ।
टेस्टोस्टेरोन र SARM YK-11 प्रकार्य र ढाँचाको सम्बन्धमा समान छन्। केवल महत्वपूर्ण अंतर यो हो कि टेस्टोस्टेरोन धेरै शरीर को कोशिकाहरु मा पुग्छ जबकि YK-11 यो कोशिकाहरु मा काम गर्दछ कोशिकाहरुमा चुनिंदा छ। शरीर तंत्रमा उच्च टेस्टोस्टेरोन एकाग्रता खतरनाक छ र प्रोस्टेट विकास जस्तै अहिल्यै पाउने स्वास्थ्य अवस्थाहरू ल्याउन सक्छ। त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले विस्तारित अवधिको लागि टेस्टोस्टेरोन लिन सक्दैनन्। यस हार्मोनले फाइदा लिन सक्दछ फाइदाहरू ठूलो मात्रामा प्रशासित हुँदा हानिको तुलनामा केहि होइनन्।
एक इंजेक्शन को माध्यम ले जब टेस्टोस्टेरोन शरीर मा प्रशासित गरिन्छ, र रक्त मा spikes अनुभव गरिन्छ। YK-11 प्रभावहरू फरक छन्। यो विशिष्ट ऊतकहरु मा कार्य गर्दछ यसैले दुष्प्रभाव संग उतार चढ़ाव अपमानजनक छन्। त्यस्तै, YK-11 टोस्टरोस्टेर इन्जेक्शनको तुलनामा सामान्यतया सुरक्षित र सुविधाजनक व्यवस्थापन गरिन्छ।
अनुसन्धान र YK-11 समीक्षाहरू साबित भएको छ कि SARMs टेस्टोस्टेरोनको तुलनामा प्रयोगको लागि सुरक्षित छ। यद्यपि, यो मतलब छैन कि प्रयोगकर्ताहरू YK-11 खुट्टा व्यवस्थापन गर्दा मध्यम हुनु हुँदैन। अनुशंसित र खुट्टा अनुशंसित मात्राहरु को कड़ाई देखि पालन गर्नु पर्छ। यस SARM को अत्यधिक मात्रामा जिगरको क्षति हुन सक्छ र यसको प्रयोग पछ्याउने न्यूनतम साइड इफेक्टहरू कम गर्न सक्छ। बडिबिल्डरहरूले यसलाई ल्यान मांसपेशिहरु निर्माण गर्न ट्रिगर गर्न निर्दिष्ट समयको लागि प्रयोग गर्न सक्दछ।
साइक्लिङ टेस्टोस्टेरोनले साइड इफेक्टहरू जस्तै रक्त क्लट, सुत्न समस्याहरू, मुँहासे वा स्ट्रोक जस्ता आउँछ। YK-11 साइड इफेक्ट अनौठो छन्; केहि प्रयोगकर्ताहरूले कुनै अनुभव गर्दैनन्। यसैले, YK-11 माटोपेशीको वृद्धि बढ्ने एक राम्रो प्रदर्शन-वृद्धि औषध हो, जूता बलहरू र अचम्मलाग्दो रूपमा राम्रो लाग्ने शरीर दिन्छ।
4. YK-11 बाट कुन लाभहरू आशा गर्न सकिन्छ?
YK-11 फाइदाहरू विशेष गरी जब खुसीको सही मात्रा प्रयोग गरिन्छ। साथै, यी फाइदाहरू प्रतिकूल साइड इफेक्टहरूसँग होइनन् जस्तै यो अन्य स्टेरियोड्स प्रयोग गर्दा यो मामला हो। फाइदाहरू समावेश छन्;
YK-11 लामो समयदेखि पत्ता लगाइएको थिएन, तर प्रयोगकर्ताको मांसपेशिहरु बलियो बनाउन राम्रो छ। कोनो द्वारा एक रिपोर्ट ले संकेत दिए कि मांसपेशियों को कोशिकाहरु YK- 11 को लागि एक्सपोज गरियो कोशिकाओं को एचटीटी को सामने पेश मांसपेशियों को कोशिकाओं को तुलना मा उच्च एनाबोलिक प्रभाव छ। धेरै अध्ययनहरूले साबित गरेको छ कि यो यौगिकले एथलीट र बडिबिल्डरहरूको लागि आदर्श मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउनका लागि एकदम सही छ। यसले यसलाई उत्प्रेरक मांसपेशिहरु को माध्यम ले प्राप्त गर्दछ र उनलाई ठूलो मात्रा को follistatin को उत्पादन गर्न को उत्तेजित गर्दछ।
YK-11 कक्षहरूमा चयन गरिएको छ जसले गर्दा त्यसमा कार्य गर्दछ जुन यसको कार्य अनुकरण गर्दछ। यसले केवल मांसपेशियों को कोशिकाओं को anabolic गतिविधि को प्रभावित गर्दछ मांसपेशियों को विकास को ट्रिगर बिना कुनै एस्ट्रोजेनिक YK-11 दुष्प्रभाव को बिना। सिग्याग्लुएड प्रभावहरू मात्र पेप्टाइडको रूपमा? होइन, धेरै भन्दा धेरै!
साथै, SARM YK- 11 ले अन्य शरीर जीनको संरचना र प्रकार्य परिवर्तन गर्दैन। यसले जोड़हरू, प्रोस्टेट, हड्डिहरु र अन्य शरीरका भागहरूमा अवस्थित एन्ड्रोजन रिसेप्टरहरूसँग हस्तक्षेप गर्दैन। प्रयोगकर्ताहरूले सबै मांसपेशिहरु निर्माणको लाभ बिना साइड इफेक्ट्स को सामना गर्नुको साथै ठेक्का स्टेरियोड्स लिएर ल्याईएका छन्।
अन्य लाभहरू समावेश छन्;
वसाको द्रुत जलिरहेको
कुनै पानी अवधारण छैन
साइकल रखरखाव चक्र पछि
सुधारिएको गति र शक्ति
प्रदर्शन र लिबियो बढ्यो
5. YK-11 खतराहरू प्रयोग गर्दा
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो ध्यान दिनुहोस् कि खुट्टा स्तर निर्धारण गर्न राम्रो छ YK-11 खतरा स्तर। खुट्टा बढाएमा, बारीमा, साइड इफेक्टहरूको अनुभवको संभावना बढाउनुहोस्। एक मजबूत SARM हुनु, त्यहाँ सम्भावना छ कि प्रयोगकर्ताहरुले केहि कम साइड इफेक्टहरू महसुस गर्न सक्थे। तिनीहरू समावेश छन्;
यो एक नकारात्मक वा सकारात्मक पक्ष प्रभाव हुन सक्छ। बाल विकासको विकास गर्न चाहने उपयोगकर्ताहरूले यस YK- 11 साइड इफेक्टसँग कुनै समस्या छैन। तथापि, ती तीव्र बाल विकास को नाप्नेहरूले चाँडै कपालबाट छुटकारा पाउन सक्छन् किनकी उनि मांसपेशियों को वृद्धि को लाभहरु को आनंद ले सकते हो। साथै, विस्तारित अवधिको लागी केही स्टेरियोड्सले कपाल हानिको कारण बनाउँछ। यसैले प्रयोगकर्ताहरूले बालको हानि समस्या समाधान गर्न YK- 11 प्रयोग गर्न सक्दछ।
YK -11 ले योरेजनिक प्रभाव ट्रिगर गर्दैन जुन यसरी प्रोस्टेटलाई असर गर्दैन। अन्य स्टेरियोड्स प्रोस्टेट आकार बढाउनका लागि चिनिन्छन्, तर यो YK- 11 को लागि होइन। पुरुषहरूले यसलाई प्रोस्टेट बढ्न र पछ्याउने जटिलताहरू बिना चिन्ता बिना प्रयोग गर्न सक्छन्।
अहिले सम्म, YK-11 निर्भरताको कुनै रिपोर्ट गरिएको मामला छैन। यदि शून्य साइड इफेक्ट भएन भने उपयोगकर्ताले यो औषधीको उपयोगलाई कम से कम रूपमा प्रयोग रोक्न सक्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले मात्र सिफारिस गरिएको खुट्टा प्रयोग गर्नुपर्दछ र यस औषधिको दुर्व्यवहारबाट सबै खण्डहरूमा जोगिन सक्दछ। कारण, YK-11 को उच्च खुराकहरु को लामो समय साइड इफेक्ट अब सम्म खोजिएको छैन।
अन्य साइड इफेक्टहरू समावेश छन्;
यद्यपि आक्रामकताले शरीरलाई असर गर्दैन, यो नियन्त्रण गर्नु पर्छ। प्रयोगकर्ताहरूले यस प्रभावको अनुभव गर्नुपर्दछ आफ्नो खुराकहरू कम गर्नुपर्छ। सही खुट्टा लिनेहरूले यस समस्याको अनुभव गर्न सक्दैनन्।
यो प्रभाव टेस्टोस्टेरोन प्रयोगकर्ताहरू बीचको सामान्य हो। YK-11 प्रयोगकर्ताहरूमा उल्लेख गरिएको स्तन आकारमा कुनै महत्त्वपूर्ण वृद्धि छैन; दुवै महिला र पुरुष। तथापि, केही व्यक्तिले एक थोपा परिवर्तन र स्तनपानको यो रिपोर्टको प्रयोग गरेपछि विस्तारित अवधिको लागि प्रयोग गरेको छ।
यदि प्रयोगकर्ताहरूले प्रतिकूल YK- 11 साइड इफेक्ट्स अनुभव गर्दछ भने, ती तुरुन्त यो यौगिकको प्रयोग रोक्न। साथै, उनीहरूले थप मूल्याङ्कन र उपचारका लागि एक चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ।
6. शरीर सौष्ठवको लागि यो कसरी राम्रो छ?
यो SARM मुख्य रूप मा मांसपेशियों को विकास को बढावा दिन को लागि बनाईएको थियो। YK- 11 दुबारा मांसपेशियों को निर्माण र रखरखाव लाई प्रोत्साहित गर्न को लागि अद्वितीय तरिका मा काम गर्दछ। यो पनि जसाएको ज्वरो मा एड्स र शरीर मा भंडारित जिद्दी अतिरिक्त वसा को कम गर्दछ।
जब मांसपेशियों को कोशिकाओं देखि उजागर गरे, YK-11 मांसपेशियों को विकास को प्रक्रिया को तेज गर्दछ। यसको अतिरिक्त, यसले अवस्थित दुबला मांसपेशियों को मजबूत गर्दछ। जस्तो कि पहिले चर्चा गरिएको छ, यो SARM चयनशील छ र विशेष कक्षहरूमा काम गर्दछ त्यसैले यस प्रकारको छोटो अवधि भित्र राम्रो परिणाम दिन्छ।
केहि मानिसहरू एक आनुवंशिक मेकअप छ जुन मांसपेशिहरु को निर्माण को समर्थन गर्दैन। YK-11 (431579-34-9) यस्ता व्यक्तिहरूलाई एक शानदार तरिकामा मद्दत गर्दछ। यो संभव छ किनकी YK- 11 एक myostatin अवरोधक हो। केहि व्यक्तिहरु मास्टोस्टिनट को उच्च सांद्रता, एक प्रोटीन छ जो उनको शरीर मा मांसपेशिहरु को विकास को रोकथाम गर्दछ। यस्ता व्यक्तिहरूले ड्रग्सको प्रदर्शनलाई समेत प्रदर्शन-वृद्धि गर्न सहयोगको साथ पनि बनाउँदैनन्। सौभाग्य देखि, YK-11 शरीर मा myostatin को स्तर को कम गर्न को लागि मदद गर्दछ यसैले दुबला मांसपेशी जन को निर्माण को कम गरेर।
7. कसले प्रयोग गर्न सक्छ YK-11?
कुनै पनि मांसपेशिहरु बढ्नको लागि तयार यो यौगिक प्रयोग गर्न सक्छन्। यद्यपि केवाई 11 सुरक्षित SARM मानिन्छ, चिकित्सकहरूले जाने-जाने दिन पछि यसलाई प्रयोग गर्न स्वास्थ्य सर्तहरूसँग प्रयोग गर्ने सल्लाह दिइएको छ। एक चिकित्सक विशेषज्ञ थाहा छ कि कसरी YK-11 काम गर्दछ र यसले preexisting हालत व्यवस्थापन गर्न को लागी दबाइ को लागी प्रभाव मा प्रभाव हुन सक्छ।
YK-11 ले अस्वस्थ स्तरको लागि टेस्टोस्टेरोनलाई प्रोत्साहित गर्दैन। यस अवस्थामा, महिलाहरु को यो भाइरस बिना डरावना र अन्य प्रतिकूल दुष्प्रभाव को बिना ले जा सकते हो। तथापि, महिलाहरूलाई कम हुनु पर्छ YK-11 खुराक पुरुष भन्दा
विभिन्न SARM प्रबन्ध गर्ने एक बिल्डर बिल्डरले स्पष्ट कारणहरूका लागि YK-11 मा स्विच गर्न सक्दछ। पहिलो, यो शक्तिशाली छ, र यसको प्रभाव एक छोटो अवधि भित्र महसुस गरिन्छ। दोस्रो, यो प्रयोग पछ्याउन कष्टप्रद साइड इफेक्टहरू। YK-11 ले एक सुरक्षित मांसपेशीलाई सबैको लागि समाधान प्रदान गर्दछ। YK-11 को एक खुराकले अन्य SARM हरूको तुलनामा राम्रो परिणाम प्रदान गर्दछ (उदाहरणका लागि यदि सबै होइन) उदाहरणका लागि Ostarine र Lgd 4033।
अझ उच्च परिणामका लागि, प्रयोगकर्ताहरू प्रायजसो व्यायाममा संलग्न रहनु पर्छ र सक्रिय रहनु पर्छ। यस यौगिकको प्रभाव एक व्यक्तिबाट फरक हुन्छ किनभने शरीर फरक हुन्छन्। तथापि, तथ्याङ्कहरू प्राकृतिक रूपमा विकास र मांसपेशिहरु को विकास को कम गर्न सक्रिय हुँदा प्रयोगकर्ता ले सिफारिस गरिएको खुराक ले निश्चित हो कि निश्चित हो।
8. इष्टतम YK-11 खुराक
यो सबैभन्दा उपयुक्त YK-11 खुट्टा बताउन गाह्रो छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले 5mg को बीचमा 10mg को एक दिनको सुझाव दिन्छ। 15 एमजी खुराक वा पनि थप सिफारिस गरिँदैन, विचार गर्नुहोस् कि खुराक उच्च साइड इफेक्टको अनुभव उच्च संभावना। कुनै पनि अवस्थामा, 10mg खुराक प्रयोग गर्दा X_UMXmg खुराक प्रयोग गर्दा प्रभाव महसुस गरे प्रभावहरू।
कहिलेकाहीँ, केहि प्रयोगकर्ताहरुले रिपोर्ट गर्दा उच्च वाई-एक्स-एनएनएक्सएक्स खुराक प्रयोग गरे बिना दुबै प्रभावहरु संग काम गरे। यो सम्भव हुन सक्छ, पहिले नै बताए अनुसार हाम्रा निकायहरू फरक छन्। अन्य प्रयोगकर्ताहरूले YAR-11 सँग अन्य SARM हरू र पंजीकृत सकारात्मक नतिजाहरू प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, यो विचारले धेरै मानिसहरूलाई यो सिफारिस गर्दैन।
YK-11 प्रयोगकर्ताहरू द्वारा समीक्षाहरू सबैभन्दा उपयुक्त खुट्टा निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको छ। व्यक्तिहरूले यी समीक्षाहरूबाट बढी ज्ञान सङ्कलन गर्न सक्छन् वा पत्ता लगाउन सक्दछ कि उनीहरूले प्रयोग गरेर राम्रोसँग काम गर्दछ। Nootropic स्रोत Bromantane: समीक्षा, प्रभाव, डोजज
कुनै पनि YK-11 खुराक प्रति दिन 5mg भन्दा कम हुनेछ सम्भावित कुनै पनि नतिजाहरू प्रदान गर्दैन। एक दैनिक आधार मा 10mg खुराक थोडा अवधि को भित्र मांसपेशी निर्माण को बढावा देगा। जोखिमबाट बच्नको लागि प्रारम्भकर्ताहरूले उनीहरूको शरीरले कस्तो प्रतिक्रिया देखाए र उनीहरूको अवलोकनको आधारमा खुल्ला मात्रामा खुल्ला वृद्धि गर्न निगरानी गर्न कम खुराकहरू प्रयोग गर्नुपर्छ।
9. YK-11 आधा जीवन
त्यहाँको सन्दर्भमा न्यूनतम वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध छ YK-11 आधा जीवन। Anecdotal अनुभवहरूको अनुसार, यो यौगिक आधा जीवन छोटो छ। यसको अर्थ यो उत्तम परिणामको लागि एक दिन धेरै पटक लिन सकिन्छ।
YK-11 को बहुविध इन्टेक्सले यो परिसरको स्तर शरीर प्रणालीमा स्थिर रहन्छ। यो एक YK-11 चक्र भरिएको प्रभाव पूरा गर्न परिणाम। उदाहरणका लागि, यदि एक बिल्डर बिल्डर प्रति दिन 10m खुराक व्यवस्थापन गर्न योजना बनाउनुहुन्छ, उसले बिहानको घण्टा र 5mg पछि साँझमा 5mg व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
10। के गर्छ YK-11 शरीर सौष्ठव चक्र जस्तो देखिन्छ?
तल YK-11 चक्रका उदाहरणहरू छन्;
छ लगातार हप्ताको लागि दैनिक आधारमा 5mg
10mg- 15m दैनिक रूपमा आठ हप्ताको लागि
YK-11 मा नयाँ प्रयोगकर्ताहरू प्राय: पहिलो चक्र प्रयोग गर्छन्। पहिलो चक्रमा उच्च खुराक प्रयोग गर्ने सुरुवातहरू फेला पार्न पनि सम्भव छ। यो सिफारिस गरिएको छैन।
अनुभवी प्रयोगकर्ताहरू दोस्रो YK-11 चक्रको लागि जान्छन्। चक्रको लम्बाइ लामो छ र एक उच्च खुराक प्रयोग गरिन्छ।
YK-11 स्ट्याक अत्यधिक सिफारिश छैन। प्रयोगकर्ताले यो यौगिकको साथ अन्य यौगिकहरूको साथमा प्रयोग गर्नुपर्दैन।
11। YK-11 परिणाम
SARM YK-11 परिणामहरू राम्रो छन्। हड्डी र मांसपेशियों को ऊतकों मा यसको एनाबोलिक प्रभाव प्रभावशाली छ। SARM प्रयोगकर्ताको अगाडि अघि र पछिको उत्सुक अवलोकनबाट, यो नोट गर्न सजिलो छ कि YK-11 अन्य SARM हरूको राम्रो परिणाम उद्धार गर्दछ। यो कारणले YK-11 (431579-34-9) बजारमा उपलब्ध सर्वोच्च SARM हो।
10lbs मांसपेशिहरु प्राप्त स्वाभाविक रूप देखि एक सजिलो कार्य होइन। तथापि, YK-10 खुट्टामा जब शरीरको बिरुवाहरू सजिलै संग 11LBS दुबला मांसपेशी जन प्राप्त गर्न सक्छन्। YK-11 चक्रहरूमा प्रयोगकर्ताहरूले पनि पागल शक्ति लाभहरू रिपोर्ट गरेका छन्। अतिरिक्त शक्ति बढाएको अतिरिक्त शक्तिले अधिक मांसपेशी फाइबर ट्रिगर गर्छ। दैनिक 5mg को एक खुराक संग, प्रयोगकर्ताहरु को दावा छ कि उनि कठोर परिवर्तन को अनुभव गर्छन।
एक राम्रो आहार र नियमित व्यायामले YK-11 नतिजा पनि निर्धारण गर्छ। यो एक राम्रो आहार खपत गर्न सल्लाह दिईन्छ र YK-11 चक्र सुरू गर्नु भन्दा पहिले पनि काम बाहिर।
"मैले मेरो पहिलो छ हप्ता चक्रको समयमा 5mg दैनिक YK-11 खुराक प्रयोग गरें। मैले यो शरीरको साथ प्रतिक्रिया गर्ने यो कम्पाउन्ड कसरी देख्नको लागि कम खुराक प्रयोग गर्थें। सौभाग्य देखि, सबै कुरा राम्रो भए, र परिणामहरू उल्लेखनीय थिए। चौथो हप्ता सम्म मैले पहिले नै केहि मांसपेशिहरु लाई प्राप्त गरेको थियो र केहि शरीर मा वसा खो दिए। म मेरो आहारमा उत्सुक थिएँ र कम क्यालोरीसँग मनपर्ने एक। म पनि धेरै सक्रिय थियो र कहिलेकाहीं हृदय रोगमा संलग्न। YK-11 मेरो नयाँ उत्तम SARM हो; कम्तीमा मलाई ती अनमोल साइड इफेक्टहरूसँग सम्झौता गर्न मैले यो अनौठो यौगिक खोज्नु अघि निरुत्साहित गरेन। "
"मैले मांसपेशियों को जन को 5.2 पाउंड प्राप्त गरे र छह सप्ताह को लागि YK-3 साइकल चलाए पछि 11% शरीर को वसा गुमायो। साथै, मैले धेरै बल पाए र अधिक वजन लिने काम गरे। निश्चित रूपमा, YK-11 बजारमा उत्तम SARM हो। मैले यो कम्पाउण्ड Phcooker.com बाट धेरै सजिलै खरिद गरे; प्याकेज सबैको लागि सोध्नु भएको थियो। यदि मेरो सक्रियतामा मात्र सक्रिय रह्यो र मेरो आहारमा जाँच गरियो भने, मैले अझ बलियो प्रभाव र राम्रो नतिजाको अनुभव गरेको छु। सामान्यतया, चक्रको अन्त्यमा परिणामहरू सन्तुष्ट भए। म मेरो भरमा प्रयोग जारी राख्न छनौट गर्दछु SARMs शरीर सौष्ठव चक्र। बाडिबाइल्डरहरूले SARM YK-11 बाट खरीद गर्नुपर्छ Phcooker.com; तिनीहरू भरोसायोग्य छन्। "
13। YK-11 पहिले र प्रयोग पछि
माथि देखाइएको फोटोहरू भन्दा अघि र पछि धेरै प्रभावशाली छन्। तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि कति बलियो YK-11 हो। बायाँमा तस्वीरलाई YK-11 खुराकमा अवस्थित व्यक्तिलाई पहिले राखिएको थियो। दोस्रो पछाडि चार हप्ता पछि कब्जा गरियो SARM YK-11 चक्र.
यो स्पष्ट छ कि प्रयोगकर्ताले छोटो समयमा भित्रको महत्त्वपूर्ण मांसपेशी मात्रा प्याक गर्यो। यो प्रगति तस्बिरले वाईके-एक्सएनएमएक्स प्रशासकबाट बिजुली बत्तीको अपेक्षा गर्न सक्ने कुरालाई विचार गर्दछ। यो पनि ध्यान दिनु राम्रो हो कि पुरुष, स्पष्ट रूप देखि, एक स्वस्थ आहार को अवलोकन र नियमित रूपमा प्रशिक्षित। यसले YK-11 प्रभावहरूलाई अझ राम्रो परिणाम दिन सक्छ।
14। कहाँ SARM खरीद YK-11 (YK-11 बिक्रिमा)
YK-11 धेरै देशहरूमा फार्मेसी र स्वास्थ्य स्टोरमा बेचेको छ। प्रयोगकर्ताहरू सजिलै यी भण्डारहरूबाट खरिद गर्न सक्छन् वा अर्डर अनलाइन पनि अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, खरिद गर्दा खरीददारहरूलाई सावधान हुनुपर्छ। यो आपूर्तिकर्ताको पृष्ठभूमि जाँच आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न को लागी सल्लाहकार छ। यो एकमात्र तरिका हो जुन तपाईं दाहिने खुट्टामा प्रस्तावित वैध उत्पादनको आश्वासन पाउनुहुनेछ। अन्य सक्रिय यौगिवहरू सहित नकली उत्पादहरू पनि बजारमा उपलब्ध छन्। यी अवस्थाहरूमा, प्रयोगकर्ताहरूलाई निश्चित रूपमा SARM YK-11 खरिद गर्नुपर्दछ।
हरेक "YK-11 बिक्रीको लागि"अनलाइन पोस्ट वास्तविक छ। प्रयोगकर्ताहरूले आपूर्तिकर्तामा ग्राहकहरूको समीक्षाहरू जाँच गर्नुपर्छ र कुनै पनि आदेशहरू गर्नु अघि प्रस्तावित उत्पादन। चूंकि YK-11 दैनिक रूपमा लिइन्छ, यो सुनिश्चित गर्न बुद्धिमानी छ कि तपाईंले एक कम्पाउन्ड किन्न चाहानुपर्छ परिणामहरू दिनुहुनेछ र प्रयोगको लागि सुरक्षित छ। बडिबिल्डरहरूले मूल्यहरू तुलना गर्न सक्दछन् र सम्भवतः कम महंगी प्याकेजको लागि जान सकिन्छ। यद्यपि, कहिलेकाहीं सस्तो महँगो हुन्छ।
आपूर्तिकर्ताको गुणस्तर र विश्वसनीयताको सन्दर्भमा धेरै विवादहरूको कारणले गर्दा उत्पादक SARM YK-11 अनलाइन Phcooker.com बाट खरीद गर्न सक्दछ। हामी सर्वोत्तम मूल्यमा मूल र उच्च गुणस्तर SARM हरू प्रस्ताव गर्छौं।
माथि उल्लेखित जानकारी अनुसार, यो स्पष्ट छ कि YK-11 माथि सबैभन्दा प्रभावी SARM सूचीमा शीर्ष। अनुसन्धान र YK-11 समीक्षाहरू साबित भएका छन् कि यसले छोटो अवधि भित्र दुबला मांसपेशी जनको विकास र विकासलाई कम गर्दछ। साथै, यो एक सुरक्षित उत्पादन हो जुन सबै स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रशासित हुन सक्छ। YK-11 चयनशील छ त्यसैले यस प्रकारका विशेष कक्षहरूलाई असर गर्छ। यसको उपयोग प्रतिकूल साइड इफेक्ट्स संग सम्बद्ध छैन।
कुनै पनि खुट्टा लिन अघि यो यौगिक हो भने यो कम्पाउन्ड उनीहरूको लागि सही छ प्रयोगकर्ताहरू प्रशिक्षक वा चिकित्सकलाई परामर्श गर्नु पर्छ। YK-11 समीक्षा नयाँ अनलाइनका लागि अनलाइन उपलब्ध हुन सक्दछ। तिनीहरूले उत्पादमा थप जानकारी सङ्कलन गर्नेछन् र परिणामहरू आशा गर्न।
अन्य खुराकहरूमा भएका व्यक्तिहरू कम्पाउन्ड प्रयोग गर्न वा चिकित्सक द्वारा होइन भनेर सल्लाह दिएका छन्। जोखिमबाट बच्न व्यक्तिहरूले YK-11 स्ट्याक लिनु हुँदैन र यसको सट्टा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। जब गंभीर साइड इफेक्ट अनुभव गरिन्छ, प्रयोगकर्ताले तुरून्तै YK-11 खुल्ला रोक्न पर्छ।
वेविस, एम।, पाइपर, टी।, डिब, जे, लागोजाडा, ए, कुन्नी, डी, प्याकेन्सी, एल, ... ... र Schänzer, डब्ल्यू। (2017)। डोपिंग नियंत्रण प्रयोजनों को लागि चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मड्युलेटर (SARM) YK-11 को मास्क स्पेक्ट्रोनेटेटिक विशेषताकरण। Mass Spectrometry मा रैपिड कम्युनिकेशन, 31(14), 1175-1183।
कोनो, वाई।, ओटा, आर, सोमेई, के, कुकबाबे, टी।, कोट, के.ए., र इनौइ, वाई। (एक्सएनएनएक्सएक्स)। चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर, YK2013, C11C2 myoblasts को follicent अभिव्यक्ति द्वारा myogenic विचलन को विनियमित गर्दछ। जैविक र फार्मास्यूटिकल बुलेटिन, 36(9), 1460-1465।
पपर, टी।, डिब, जे।, पुट्ज, एम।, फसहलर, जी, पप, वी।, लागोजाडा, ए, ... र थेविस, एम। (एक्सएनएमएक्सएक्स)। SARM Y2018K1 को vivo चयापचय मा अध्ययन: मेटाबाइट्स को पहिचान र विशेषता डंपिंग नियंत्रण को लागि संभावित रूप देखि उपयोगी। औषधि परीक्षण र विश्लेषण, 10(11-12), 1646-1656।
2019-02-21 12 मा: 59
म IGF1 DES, HGH191AA, MXXUMX र YK-2866 को सानो रकम को मूल्य जान्न चाहन्छु।
2019-04-104मा: 00
होल टेंग el Yk11 डेल 10 एमजी / एमएल
2019-04-123मा: 45
ठीक छ, हामी तपाईंलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नेछौँ।
2019-10-206मा: 51 बजे
Estou fazendo o uso do Yk11 faz um mêseagora usarei durante mas um mês। सेन्टी डिफेरेन्स एपेनस फार्स ए ई डिस्पोजेइओ पारा मल्हार, मास नउ रिजल्ट एन्ड एन्ड एन सेन्टी डिफेरेन्स। Gostaria de saber se o नतीजा vem após o ciclo सम्पूर्णता? XOUMNXXg डायरियामेन्टको स्थापना गर्नुहोस्
"डैक्सोक्सिन" "तपाईलाई भन्नुहोस्: कसरी प्रिमियर स्नेहको उपचार गर्ने?
SARM माथि 10 मा पूरकहरू: SR9009 (1379686-30-2)